Agaasime ku xigeenkii hore ee NISA oo loo magacaabay la taliye sare - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaAgaasime ku xigeenkii hore ee NISA oo loo magacaabay la taliye sare
Agaasime ku xigeenkii hore ee NISA Cabduqaadir Maxamed Nuur. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Agaasime ku xigeenkii hore ee haayada sirdoonka qaranka ee NISA ayaa loo magacaabay la taliye sare.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Shiikh ayaa Cabduqaadir Maxamed Nuur u magacaabay la taliyihiisa sare, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday xafiiska guddoomiyaha maanta oo Sabti ah.
Asbuucii lasoo dhaafay, Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa agaasime ku xigeenkii hore ee NISA xilka ka qaaday, isaga oo magacaabay Fahad Yaasiin, oo ah saaxiibkiis ay aad isugu dhow-yihiin.
January 26, 2018 Shaqaale ajnabi ah oo katirsanaa UNICEF oo Muqdisho lagu dilay